ko htike's prosaic collection: ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ ရှေ့ရေး
ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ ရှေ့ရေး
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ မြန်မာ့ ရှေ့ရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စကို တွေးမိတိုင်း ဘ၀င်မကျနေတဲ့ အကြောင်း တခုက အမြဲရှိနေတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ တွေးထင်နေတဲ့ ဘ၀င် မကျမှုပါ။
ရှေ့ရေးဆိုလို့ အလွန်ဝေးတဲ့ တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ဆိုတာကြီးကို အဝေးကြီးလှမ်းပြီး မပြောပါဘူး။ လာမယ့် ၂ နှစ် ထက် မကျော်နိုင်တဲ့ ကာလမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ရှောင်လွှဲလို့ မရမယ့် အရေးကို တွေးနေမိတာပါ။
အခြေခံ logic လေးပါပဲ။ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူအားလုံးနဲ့ပါ။ အတော်များများက မမြင်ဘဲ ကျော်သွားတဲ့ နေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နအဖ ပြောနေတာ၊ UN က ကူညီပြောဆိုနေတာ၊ ပြည်သူက တောင်းဆိုနေတာ ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးကို ခဏ ဖယ်ထားလိုက်ပါဦးလို့ ပြောပါရစေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေးကို မေ့ထားလိုက်ပါဦး။ နအဖ လူသတ်ခဲ့တာတွေ၊ ထောင်ချ နှိပ်စက်ခဲ့တာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားတွေ ခဏ မေ့ထားလိုက်ပါဦး။
ဖယ်ထားလို့်မရ၊ မေ့ ထားလို့ မရတာက လာမည့် ( ၂ ) နှစ် အတွင်းမှာ တကယ်လက်တွေ့ ကြုံတွေ့ ရမယ့်၊ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ပါပဲ။
ပြည်သူတွေမွဲတာ အရင်ကတည်းကပါ။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေစရိတ် ၂ ဆ လောက်နီးနီး ထိုးတတ်သွားတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ ၀င်ငွေက ဘာမှ မတိုးလာပါဘူး။ အရင် အတိုင်းပါပဲ။(နည်းနည်း တိုးတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။) အရင် ၀င်ငွေ၊ အရင် ထွက်ငွေတွေနဲ့တောင် မျက်လုံးပြူးနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ၂ ဆ တိုးလာတဲ့ ထွက်ငွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ တောင့်ခံနိုင်မှာလဲ...။
ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေက ဆင်းရဲတာပါပဲ။ ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေလို့ မရနိုင်အောင်ကို ဆင်းရဲပါတယ်။ သုံးနိုင်၊ စားနိုင်၊ သွားနိုင်၊ လာနိုင် တဲ့ လူတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ မြန်မာ့ လူဦးရေးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မပြောပလောက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းပါ။
ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်တော့တဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဆာလောင်နေတဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လို ကျွေးမွေးမလဲ။ တောနယ်တွေမှာတော့ မျှစ်ချိုး၊ မှိုခူး စားသောက်လို့ ရနိုင်ပေမယ့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးရဲ့ ဆင်ခြေဖုံးမှာ နေတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ ... ။
ဒီနေ့ မငတ်နိုင်သေးပေမယ့် မနက်ဖြန်က မသေချာပါဘူး။ မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်းတွေဆီက ချေးငှား စားသောက်နေရတာ ဘယ်နှစ်လ၊ ဘယ်နှစ်ရက် တောင့်ခံနိုင်မှာလဲ။ အဲဒီမိတ်ဆွေတွေကရော အမြဲ ချေးငှားနိုင်ပါ့မလား။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အတွင်း ပစ္စည်း၊ အပြင် ပစ္စည်းတွေက ဘယ်အချိန်အထိ ပေါင်နှံ ရောင်းချ စားသောက်နိုင်မှာလဲ...။
ဒါဆို အဲဒီလို မွဲလာတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ဘာလုပ်မလဲ ... ။ အဆိုပါ ပြည်သူနေရာမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် တွေးခေါ် ခံစားကြည့်ပါ။ ၂ နည်းပဲ ကျန်ပါတယ်။ တောင်းရမ်း စားသောက်နည်းနဲ့၊ ခိုးဆိုး လုယက်နည်းပါပဲ။ တောင်းစားတာက မသေချာပါဘူး။ မလောက်င နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ခိုးဆိုး၊ လုယက် တဲ့ နည်းကိုသာ ရွေးချယ်ရပါတော့မယ်။ ဒါဆို တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ဟာ လာမည့် ၂ နှစ် အတွင်း (၂၀၁၀ မရောက်ခင်) မှာ ဘယ်လို အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ ...။ ဒုစရိုက် တိုင်းပြည် ဖြစ်လာပါတော့မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ၂ နှစ် အတွင်း ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်း တစ်ခုခုကို နအဖက လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်ဟာ (နအဖ ပြောနေတဲ့ စကားလုံးငှားပြီး) အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းရေးဆီ ဦးတည်နေပါပြီ ဆိုတာ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတာ သူတို့ အလုပ်မလုပ်လို့၊ စီးပွားရေး ပိတ်ခံထားရလို့ ဆိုပြီး နအဖက ဆင်ခြေပေးမှာပါ။ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်၊ (သို့) နိုင်ငံတော်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ နာမည်ခံထားတဲ့ နအဖ လူကြီးတွေ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေး ကောင်းအောင်၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေ ပေါ်လာအောင် လုပ်ရမှာပါ။ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်မယ့် လူတွေကို တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်စီမံခွင့် အာဏာပေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် စိုးရိမ် ဘ၀င် မကျတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဒုစရိုက်မှုတွေကို စားရင်းကောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ စက်တင်ဘာ အပြီး ဘယ်လောက် အထိ ဒုစရိုက်မှုတွေ တိုးလာနေပြီလဲ .... ။
တိုင်းပြည်ဟာ အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ခြောက်ထဲကို နအဖက ဦးတည်နေပါပြီ။ သိပ်မကြာတဲ့ ၂ နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ပါဘဲ။ ဒါ ဒီမိုကရေစီကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သံဃာ လှုပ်ရှားမှုကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်းရဲ မွဲတေမှုပါ။ ဆင်းရဲ မွဲတေမှု .....။
မြန်မာ ပြည်သူတွေ ဘ၀က လုံခြုံမှု လုံးဝ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ လမ်းသွားတာတောင် အန္တရာယ်တွေ မထင်ပဲ အချိန်မရွေး ကျလာနိုင်ပါတယ်။
ကဲ .... တိုင်းပြည်အခက် အခဲတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ..။ လူတွေ ငတ်လာရင် တပ်မတော်လည်း ငတ်နေတာပါပဲ။ တပ်မတော် ငတ်တယ်ဆိုတာ တပ်သားတွေ ငတ်တာပါ။ တပ်သားတွေ ငတ်လာရင်တော့ တပ်သားတွေရဲ့ သေနတ်ထဲက ကျဉ်ဆံတွေက ဘယ်ကို သွားမှာလဲ ...... ။
လူတွေ သံဃာတွေကို သတ်ပြီးတာတောင် ဆင်းရဲမှု မပျောက်လျှင်တော့ နောက်ထပ် ငတ်လာတဲ့ စစ်သားတွေ သတ်ရမှာက ကိုယ့်ဘာသာ သတ်သေတာဖြစ်မလား၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေပြီး အမိန့် ပေးနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလား ဆိုတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တွေးတောနိုင်ပါစေ .. ။
အောက်မှာတော့ စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှု အပြီး ရန်ကုန်မြို့ မှာမြင့်မားလာနေတဲ့ ဒုစရိုက်မှုတွေကို ဧရာဝတီက သတင်းတစ်ခုမှာ တွေ့ရမှာပါ။
Crime Rate Increases in Rangoon
Crime in Rangoon has reportedly increased since fuel price increases in August cut deeply into living standards. The release inarecent amnesty of more than 8,000 prisoners, most of them convicted criminals, is also being blamed by local people for an evident rise in street crime. The latest incident, reported by The Mirror and The Myanma Alin, occurred this week whenataxi driver was robbed at knife point in Rangoon’s North Okkalapa Township. Robberies at Saw Bwar Gyi Gone Market and in Lanmadaw Township in downtown Rangoon were also reported by local residents. A car was stolen while its owner was absent for three hours. A Rangoon-based journalist reported that three police officers had been killed byaman wieldingaknife in Thingangyun Township. Observers said one additional possible reason for the rise in crime could be that security forces are concentrating on the political dissident movement instead of normal policing duties.
Posted by ကိုထိုက် at 20:08
Army soldiers will not hungry because Yu Kyaung than shwe is lunatic but he got hold on the rice bow so peoples will starving to dead but not the army. You can see how strong the soldiers are during the September 2007 crack down. Peoples are so weak that the peoples are half starving and protest on the street that even they cannot fight back, starve make the peoples weak on every way. Crime rate will be rising because Yu Kyaung want Rangoon to destroyed completely so most of the poor labors force will following to the Pyinmana so he can get enough peoples for human aerial bomb shelter, that is in case UN security force need to come in. Streets are rule by their criminals that criminals are protected by police force so they can legally kill the oppositions and whose ever open their mouth.
This is their making which is not supposed to be happening like Burma. We are not like CONGO we got enough food to feed the HUNGER but Yu Kyaung than shwe is the one who is making that all. So it is only chance to change Burma forever within next4months or Burma is finish. May be Burma fate is already written.
16 December 2007 at 10:04
yap the result of poverty is an inrease of crime and moral deteriorations. ppl do gamblings , playing cards, just watching korean movies, being lazy and all that coz they all know that however they work hard , they wont get any benifits. i hate this military regime from the bottom of my heart.
16 December 2007 at 12:02
Thet Thet Tun said...
You are absolutely right. I really wonder how generals can live without thinking about such situation. many kids, women and old people are on the street just like ordinary people. But if you approach them and try to talk to them, they would ask you to help them indirectly.
I was in Yangon4years ago. I met our teacher from my teen-hood. He wasagreat man: patriotic, sincere, hardworking, and gave us all knowledge he had.
After so many years being absent from Yangon, I went to see him. It was heart breaking to see him living inasmall monastery. He won't have anything to eat if the monk does not leave left over food for him.
16 December 2007 at 14:01
17 March 2009 at 06:17
25 March 2009 at 13:18
26 March 2009 at 03:58
6 April 2009 at 09:29
☆♀ 888視訊聊天室 ☆♀
♀ 找網愛聊天室 ☆
※免費線上a電影直播※
☆♀ 情色視訊聊天 ☆♀
☆♀ 美女視訊聊天 ☆♀
☆♀ 情色影片下載 ☆♀
☆♀ 情色成人影片 ☆♀
☆♀ 成人電影下載 ☆♀
☆♀ 火辣美媚 ☆♀
☆♀ 一夜情影音交友 ☆♀
☆♀ 影音交友 ☆♀
☆♀ 自拍偷拍影片 ☆♀
☆♀ 網愛俱樂部 ☆♀
☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀
☆♀ 網愛bbs ☆♀
☆♀ skype網愛 ☆♀
☆♀ 080辣妹聊天室 ☆♀
☆♀ 成人哈啦聊天室 ☆♀
☆♀ 成人遊戲區 ☆♀
☆♀ 成人小說 ☆♀
6 April 2009 at 09:33
13 April 2009 at 14:47